MURUGO: Van Dijk Oo Macasalaameeyey Xili-ciyaareedka, Muddo SANNAD Ah Oo Uu Maqnaanayo & Xogtii Ugu Horreysay Ee Dhaawaciisa Oo Soo Baxday - Gool24.Net
MURUGO: Van Dijk Oo Macasalaameeyey Xili-ciyaareedka, Muddo SANNAD Ah Oo Uu Maqnaanayo & Xogtii Ugu Horreysay Ee Dhaawaciisa Oo Soo Baxday
Difaaca Liverpool ee Virgil van Dijk ayaa macasalaameeyey xili ciyaareedkan oo dhan kaddib markii uu dhaawac culus kasoo gaadhay lugta kulankii Merseyside derby ee Sabtidii maanta ay barbarraha 2-2 ku kala baxeen Everton.
Difaaca reer Netherlands ayaa qalad xun uu ku galay goolhaye Jordan Pickford daqiiqadihii ugu horreeyey, waxaana isla markii ay ciyaartu dhamaatay loola cararay cusbitaal ku yaalla magaalada Liverpool, kaas oo sidoo kale la geeyey Thiago Alcantara oo isagana uu taakal xun ku qabtay Richarlison oo kaadh cas ku qaatay.
Sida uu ku warramay Telefishanka beIN Sports, Van Dijk ayaa garoomada ka maqnaan doona muddo sannad ah oo uu u jiifi doono dhaawaca soo gaadhay, taas oo dhibaato weyn ku noqon doonta Liverpool oo la’aantii aan la qiyaasi karayn halka ay horyaalka kaga dhamaysan doonto.
Khabiirak ciyaaraha Richard Keys oo fadhiyey Istuudiyaha telefishanka beIN Sports ayaa sheegay inay soo gaadheen macluumaad la xidhiidha dhaawaca Van Dijk, isla markaana ay waxyeello weyni kasoo gaadhay carjowda hoose ee jilibka oo diicsimaad ku yimid culayskii dusha sare kaga dhacay darteed, taasina ay keeni doorto in ugu yaraan muddo sannad ah uu garoomada ka maqnaado.
“Macluumaadka aanu helayno waxay sheegayaan inuu dhaawac kasoo gaadhay lafaha xidhiidhiya jilibka ee hoosta, haddii ay taasi dhacdana, waxaan sii sheegayaa inay u dhamaatay, waxaanu garoomada ka maqnaan doonaa muddo toddoba illaa siddeed bilood ah.” Ayuu yidhi Richard Keys.
Halka uu Van Dijk ka dhaawacmay
Waqtiga uu Richard Keys warbixintan sheegay waxa uu Van Dijk ku maqnaa cusbitaalka oo isaga iyo saaxiibkii Thiago lagaga qaadayay sawirro lagu ogaanayo inta uu le’eg yahay dhaawacyada soo gaadhay.
Wargeyska Liverpool Echo ayaa isaguna ku warramay in Van Dijk uu cusbitaalka kasoo laabtay isagoo walaacsan oo ay ka muuqato murugo weyn kaddib markii laga qaaday sawirrada, laakiin ay kooxdu wali sugayso natiijada baadhitaanka oo dhamaystiran.
Sidoo kale, Thiago ayaanu wajigiisu fiicnayn waxaana inkasta oo uu ciyaarta sii watay uu jabay jug weyn oo uu kasii dayriyey Jurgen Klopp.